५ बर्ष भित्र घर–घरमा सडकदेखि निशुल्क शिक्षा हुदै रोजगारीसम्मको योजना छः प्रदेश सभा उम्मेदवार थापा मगर (अन्तरवार्ता) -
५ बर्ष भित्र घर–घरमा सडकदेखि निशुल्क शिक्षा हुदै रोजगारीसम्मको योजना छः प्रदेश सभा उम्मेदवार थापा मगर (अन्तरवार्ता)
आसन्न मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट बाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेदवार बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रिय सदस्य रामबहादुर थापा मगरसंग गजेन्द्र राईले गरेको कुराकानीको केहि सारः
यो प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यो दुवै निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । प्रतिनिधिसाभाको निर्वाचन यो भन्दा अगाडि पनि भए । निर्वाचन नौलो होइन । तर जनयुद्ध र जनआन्दोलन पश्चात बनेको संविधानसभाद्धारा निर्मिति संविधान र कानून बमोजिमको निर्वाचन भएकोले यो केही नौलो तर महत्वपूर्ण छ । अब बन्ने प्रतिनिधिसभामा सबै जाति, बर्ग, लिङ्ग र समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । जुन प्रकारको प्रतिनिधिसभा पहिले कहिल्यै बनेको थिएन । अब बन्ने संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कानून बनाउने छ । तर यो भन्दा अगाडिका २०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ को संसदले यस्तो काम गर्न सक्दैनथ्यो । यसर्थ संविधानसभाद्धारा बनेको नेपालको संविधान २०७३ को सफल कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कानून र सोही कानून र जनभावनाअनुसारको बिकाश र जनजिविकाको सुनिश्चित गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि यो निर्वाचन हुन गईरहेकोले यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । यो प्रदेश सभाको निर्वाचन झनै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक पनि छ । यस अर्थमा कि, यस्तो निर्वाचन यो भन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । यो प्रदेश सभा हिजोको प्रतिनिधिसभा जस्तै हो । जस्ले प्रदेश अन्तर्गतको एउटा संसद र सरकार बनाउछ र सोही अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गर्दछ । अब बन्ने प्रदेश सभा काठमाडौंमा होइन । बिराटनगर या १ नं प्रदेश अन्तर्गतको कुनै ठाउँमा बन्नेछ । जस्ले गर्दा जनतालाई आफ्नो काम गर्नको लागि काठमाडौं जान पर्दैन । अर्कोकुरा यो प्रदेश सभाले प्रदेशस्तरीय मुख्य मन्त्री सहीतको सरकार बनाउने भएकोले अब १ नं प्रदेशको विकाश र समृद्धिको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन पनि त्यही सरकारले बनाउने र त्यो सरकार यही प्रदेश सभाका सदस्यहरुले बनाउने भएकोले यो प्रदेश सभाको निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । अहिले स्थनीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरु आईसकेका छन् । तर उनीहरुले गर्ने काम के के हो ? कसरी गर्ने ? कुन कानून अन्तर्गत रहेर काम गर्ने ? जन प्रतिनिधिहरु अलमल छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने गराउने कानून प्रदेश सभाले निर्माण गर्नेछ भनेर संविधानले भनेको छ । तर प्रदेश सभा नै बनिसकेको छैन । तसर्थ अब स्थानीय तहलाई सूचारु गर्ने कानून पनि प्रदेश सभाले नै निर्माण गर्ने भएकोले यो प्रदेश सभाको निर्वाचन महत्वपूर्ण छ ।
निर्वाचन जित सुनिस्चित गर्न दलको प्रभावले काम गर्छ कि उम्मेदवारको ब्यत्तित्वले ?
निर्वाचन जित्नको लागि व्यक्तिको प्रभाव त आवश्यक हुन्छ नै । तर व्यक्तिगत भन्दा पनि राजनैतिक दल महत्वपूर्ण हो । राजनैतिक दल व्यक्ति, सिद्धान्त र संगठनको संयुक्त रुप हो भने व्यक्ति व्यक्ति मात्रै हो । उसले व्यवाहर मात्रै गर्ने हो । राजनैतिक पार्टी तीन खुट्टा भएको ओदान हो भने व्यक्ति ओदानको एउटा खुट्टा मात्र हो । भात पकाउन ओदानको एउटा खुट्टा मात्रले पाक्दैन तिनै वटा हुन्छ तसर्थ चुनाव जित्नको लागि पार्टी मुख्य हो भने व्यक्ति सहायक हो ।
नयाँ अनुहारको उम्मेदवार भए भनेर तपाईको खुब आलोचाना हुन्छ ? साच्चै, हो’चै तपाई को ?
कुन अर्थमा नयाँ अनुहार भनेको हो । त्यो मलाई थाहा भएन । भन्ने हरुलाई नै सोध्नु पर्ला । हरेक व्यक्तिको अनुहार अर्को व्यक्तिको भन्दा नयाँ र नौलो नै हुन्छ । संसारका हरेक मानिसको अनुहार फरक फरक हुन्छ । केहीको उस्तो उस्तै जस्तो हुन्छ । तर दुरुस्तै र एउटै हुँदैन । यो जैविक कुरा हो । तर राजनीतिमा अनुहार हेर्ने होइन । उसको योग्यता र क्षमता हेर्ने हो । उसको पार्टीले के नीति र सिद्धान्त लिएको छ । त्यो महत्वपूर्ण हुने भएकोले नीति र सिद्धान्त हेर्ने हो । मानिसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो उसको योग्यतामा निर्भर हुन्छ । जसरी एउटा अधिकृतको लागि उसको पहिलो योग्यता वि.ए. पास हो । बि ए पास छ भने ऊ अधिकृतको लागि योग्य मानिन्छ । क्षमता भनेको उसले त्यो अबसर पाएपछि प्रदर्शन गर्ने कार्यकुशलता हो । तर अधिकृत नै नभई यसले गरेन भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी राजनैतिक नेता हुनको लागि चाहिने योग्यता ऊ त्यो दलमा संलग्न छ कि छैन ? र उसको सो पार्टीमा कुन स्तरको भूमीका छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सन्दर्भमा म २०४७ सालमा नेकपा (मा.ले.) राजनैतिक पार्टीको भातृसंस्था अनेरा स्ववियूमा आवद्ध भई नेकपा एमाले हुँदै अहिले नेकपा (माओवदी केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य हुँ । यसर्थ म राजनैतिक दृष्टिकोणले उम्मेदवारको लागि योग्य नै छु भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा म यही नगरपालिका अन्तर्गतको हालको त्रि.न.पा. १५ र साविकको खाँबु गाविस वार्ड नं ३ मा जन्म भई यहीको स्थायी बासिन्दा हुँ भने मेरो अनुहार कसरी नौलो भयो ? अर्को कुरा म संविधानसभा २०६४ मा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनि ४ बर्ष सभासद भई संविधान निर्माणको काममा संलग्न भएको व्यक्ति हो । त्यतिखेर मेरो कार्यक्षत्र हालको प्रदेश १ (१) माथियो । मैले त्यतै बढी काम गरें किन कि यहाँ हाम्रो पार्टीको अर्कै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । मलाई सबैले नचिन्न सक्छन् । यो उनिहरुको कमजोरी होइन । किन कि सबैले सबैलाई चिन्दैनन् । तर राजनैतिक पार्टीमा चासो राखेका र संलग्न व्यक्ति सबैले चिन्छन् । म यही त्रियुगा जनता मा.वि.मा पढेर यही स्कूलबाट एस.एल.सी.पास गरेकोले र मेरो नून तेल किन्ने बजार नै गाईघाट भएकोले मेरो अनुहार यो क्षेत्रको लागि नौलो होइन । मेरो जन्म, घर (आज सम्म पनि मेरो नेपालको कही कतै घर छैन), पढेलेखेको स्कूल र साथी तथा आफन्तहरु यहीं छन् । अनि कसरी मेरो अनुहार र म नौलो ? बरु अरु उम्मेदवारहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । वहाँहरु जन्मेको ठाँऊ कहाँ हो ? र कहाँ को शिक्षा लिएको हो ?
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कस्ता–कस्ता स्थानीय मुद्दालाई प्राथामिकता दिनु भा’छ ?
प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुद्दाहरु स्थानीय मात्रै होइन । राष्ट्रिय पनि छन । जो हाम्रो संयुक्त बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जहाँसम्म तपाईको प्रश्न स्थानीय मुद्दासँग सम्बन्धित छ । यो सम्बन्धमा मेरो मुख्य स्थानीय मुद्दा निम्न छनः
(१) अबको ५ बर्ष भित्र यो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका विकट ठाँऊहरु खाँबु, साउने र चिलाउनेका जनताहरुको घर घरमा सडक र बिजुली बत्ति पुर्याउने ।
(२) त्रियुगा नगरपालिका भरीका बाटोलाई कालो पत्रे बनाउने ।
(३) राष्ट्रकै गौरब उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई उसको क्षमता अनुसार पूर्ण रुपमा प्रयोग गराउने अर्थात उसले क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सक्ने बनाउने ।
(४) सरकारी स्कूललाई निजि स्कूल भन्दा बढी सक्षम बनाउने र हाम्रा बच्चाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्ष दिलाउने ।
(५) त्रियुगा जनता क्याम्पसलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयको समेत पठन पाठन गर्न सक्ने र विद्यावारिधि (पिएच डी) सम्मको शिक्षा हासिल गर्न सक्ने बनाउनेदै यो १ नं प्रदेशको शैक्षिक हब बनाउने ।
(६) यहाँका कृषकहरुलाई राज्य बाटै निःशुल्क मल बीऊको व्यवस्था गर्ने र कृषि रिण र अनुदानको व्यवस्था गर्नुको साथै यहाँका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पैठारी गरेर कृषकहरुको जीवनस्तरलाई उकास्ने ।
(७) यो क्षेत्रमा उद्योग,कल कारखाना र औद्योगिक विकाश गरी बेरोजगार युवाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने ।
(८) स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क अध्ययान गर्न पाउने र पोशाक पनि उपलव्ध गराउने ।
(९) गाईघाटको अस्पतालको सैथ्या बृद्धि गर्ने र सबै प्रकारका रोगको उपचार यहीं गर्न सक्ने प्रविधि र मानव संसाधनको व्यवस्था गराउने ।
(१०) बृद्ध बृद्धालाई मासिक रु ५००० भत्ता उपलव्ध गराउने ।
(११) यस क्षेत्र बासी सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याऊने ।
(१२) यहाँका स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने ।
(१३) र, यस क्षेत्रका जनतालाई समृद्ध बनाउने ।
मुख्यतया यीनै स्थानीय मुद्दाहरु मेरो प्राथमिकताको विषय हुनेछन् । र अन्य पनि साथै लैजाने छु ।
यो क्षेत्र नम्बर १ (२) मा तपाईलाईनै भोट, तपाईलाईनै विजय, किन ?
माथि उत्तर नं ४ को कार्य सम्पादन बाम गठबन्धनको सरकारले मात्रै गर्न सक्ने भएकोले र सो बाम गठनबन्धनको उम्मेदवार म भएकोले सम्पूर्ण जनसमुदायमा मलाई भोट दिई बिजय गराउन अनुरोध गर्दछु ।
बाम गठबन्धन भित्रको मत एक रुपतामा झर्ने आधारहरु के–के छ ?
यसका आधारहरु मुख्यतया निम्न छन्ः
(१) हामी बाम गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार पूर्व सभासद भई संविधान निर्माणमा सहभागि भएको र संविधानले परिकल्पना गरेको विकाश र समृद्धिलाई हामीले मात्रै पुरा गर्न सक्ने भएकोले ।
(२) संविधानसभा, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हाम्रै मुद्दा भएकोले ।
(३) देशमा दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हाम्रै गठबन्धन (बामपन्थी) को भएकोले ।
(४) अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थाको नेतृत्व र परिवर्तन हाम्रै पार्टीको र जनताले साथ दिएकोले ।
(५) राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा हाम्रो पार्टीहरुको मुद्दा भएकोले ।
(६) राजनैतिक परिवर्तन हाम्रै पार्टीले गरेको र अब सोही परिवर्तनको लक्ष मुताविक विकाश गर्नको लागि जस्को नीति उसैको नेतृत्व आवश्यकता भएकोले ।
(७) बाम गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरुको साझा दर्शन र कार्यक्रम भएकोले र देशको अग्रगामी परिवर्तन गर्न हाम्रो पार्टीहरु (गठबन्धन) मात्रै सक्षम हुने भएकोले ।
मुख्यतया यीनै कारणले गर्दा बाम गठबन्धनको मत एकरुपतामा झर्ने छ ।
यो निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य कसरी परिवर्तन होला ?
(१) यो निर्वाचन पछि हाम्रो बाम गठबन्धनले दुईतिहाई बहुमत ल्याउने भएकोले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ ।
(२) संविधानसभाले गर्न नसकेको काम प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतले पूरा गर्ने छ ।
(३) देशमा ५ वर्षको लागि स्थिर सरकार बन्ने छ र स्थिर सरकारले बिकाश र समृद्धिको ढोका खोल्ने छ ।
(४) उत्पिडित,उपेक्षित सबै बर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदाय हाम्रै गठबन्धनभित्र समेटिने हुनाले उनीहरु प्रतिको विभेद र उत्पिडन अन्त हुनेछ । समृद्ध समाज बन्ने छ र देशले बिकाश र समृद्धिको बाटो तय गर्दै देशको अर्थतन्त्र समाजबाद तर्फ उन्मुख हुने छ ।
तपाई त पूर्व सभाषद् पनि हुनुहुन्छ । संसदको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पाटोमा सुधारनै पर्ने कुराहरु के–के होलान् ?
हो, म पूर्व सभासद भएकोले म सँग संसदको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पाटोका केही ज्ञान र अनुभव पनि छ । अर्को कुरा म कानूनको विद्यार्थी भएकोेले निसन्देह संसदको गरिमालाई उच्च पार्ने पहल गर्ने छु । खासमा संसदको व्यवास्थापकीय र प्रशासनिक पाटोमा अहिले देखिएको कानून र सांसदहरुको भूमीकालाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ संसदीय व्यवस्थालाई पूँजीवादी दर्शन बोक्ने पार्टीहरुले संसारकै उत्तम व्यवस्था भन्छन् । तर हामी कम्यूनिष्टहरु त्यसो भन्दैनौं किन भने हामी संसदीय व्यवस्थाले ल्याउने नकारात्मक कार्यको पनि उत्तिकै आलोचना गर्दछौं । र यसलाई सुधार तर्फ लैजान्छौं । मेरो बिचारमा संसदको व्यवस्थापकीय र प्रशाशनिक पाटोमा निम्न कुराहरु सुधार गर्नै पर्छःः
(१) सांसदहरुलाई विगतको संसदले खसिबोका जस्तो किनबेच हुने बस्तुको दाँजोमा हेर्ने सम्मको अवस्थामा पुर्यो यसलाई सुधार्नै पर्छ ।
(२) संसदीय व्यवस्था शासनको लागि आफैमा पूर्ण होइन । तर यसले जति गर्न सक्छ त्यति जनताको मनोभावना र आकाँक्षा अनुसारको गर्नु पर्छ,
(३) अस्थायी सरकारले जनताको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन तर अबको संसदले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने छ । म त्यसमा प्रतिवद्ध छु ।
अन्त्यमा, अबको तपाईंको भूमिका र बाटो कस्तो हुनेछ ?
मेरो अबको भूमीका र बाटो विगत संविधानसभामा गरेको अनुभवको आधारमा जन आकाक्षा अनुसारको कानून र नीति नियमहरुको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमी निभाउने र सोही कानून मुताविकको कानूनहरु निर्माण गरी जनताको जन जिविकाको सवाललाई सम्बोधन गरी समृद्ध समाजको निर्माण र जनतालाई खुसी र सम्पन्न गराउने हुने छ ।
उम्मेद्वारहरुले मनोनयन फिर्ता लिएसँगै उदयपुर “लालकिल्ला” बनाउने उद्घोष
यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय